पूर्व सचिव लेख्छन मलाई किताव छपाउने जाँगर छैंन
भीम उपाध्याय/ मलाई किताब छपाउने रहर नलाग्नुको पछाडि छापेको किताब बिक्री गर्न नै हैरान देखेरै हो पढ्ने कुरा त कता हो कता! किताब लेखकहरू आफै लगानी गरेर छपाउछन् र अफिस अफिस चिनजान व्यक्तिको घरदैलो दैलो किन्दिनु पर्यो भन्दै भिडाउछन् । यसरी किनिएको किताब ८०% कसैले पढ्दैनन् र ती अफिसको स्टोरको कुनामा वा कसैको घरमा पुगेर थन्किन पुग्छन् ! अहिले...
एनआरएनमा मेरो भोट उहाँहरुलाई
रामचन्द्र भट्ट/एनआरएनमा मेरो भोट उहाँ (हरु) लाई : – एउटै पदमा मैले दोहोर्याएर मतदान नगर्ने निर्णय गरेको छु । अर्थात अघिल्लो पटक मैले जो जसलाई मतदान गरेँ । ती मध्य जो फेरि पनि त्यही पदमा उम्मेदवार हुनुभएको छ भने मेरो मत उहाँलाई हुनेछैन । – नेपाली समुदायलाई ‘मर्दा र पर्दा’ सहयोग गरिरहेका र खटिरहेकालाई म भोट दिन्छु । दोहोरो नागरिकताको...
सञ्जीव सुव्वा /एक जना व्यवसायी मित्रले गज्जब को कुरो सुनाउनु भयो। नेपाली फरर बोल्ने चाइनिज व्यवसायी ले एक ग्रुप पण्डितजीहरुलाई चाईना लाग्या छन् रे। त्यो चाईनिज व्यवसायी ले जनै उत्पादन गर्ने उद्योग बनाएको रहेछन, अनि पण्डित जीहरुलाई उद्योगको दर्शन गराएर जनैलाई ईण्डोर्स गर्ने प्लान हो कि। उनको प्लान नेपाल र ईण्डियामा जनै सप्लाई गर्ने...
कर्जा लिन कति दिन लाग्छ ?
अजय श्रेष्ठ/अब कर्जा प्रवाह गर्न 'कति दिन' लिने भन्ने प्रतिस्पर्धा बढेको भान हुन्छ। यस्तो सेवाको प्रचार गर्दा संस्थाले ती कर्जा असूल गर्न 'कति दिन' लिने भन्ने पनि आन्तरिक प्रचार गरे हुन्छ जस्तो लाग्छ। फास्ट फुडले स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न पनि कडा व्यायामको आवश्यकता त पर्छ, हैन र ? (यो नितान्त व्यक्तिगत...
नेपाली महिलाहरुको शक्ति मजवुत : अमेरिकी राजदूत टेप्लीज
नेपाली महिलाहरुले मनाउदै गरेका तीज पर्व मनाईरहेको देखेर मलाई उनीहरुको देशलाई रुपान्तरण गर्नको लागि ठूलो शक्ति र संभावना भएको अनुभूति भएको छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अईलिना वि टेप्लीजले आफनो टिवटमा यो तस्वीर सहित नेपाली महिलाहरुको शक्तिको वारेमा व्याख्या गरेकि छन् । ...
पाैडेल नेता हैनन् ।
प्रदीप भट्टराई /निर्वाचन आयोगले अयोग्य ठहराएका गौरीले अब त उम्मेद्वारी पो फिर्ता लिए रे ? एनआरएन नेता होलान् भनेको त कमेडियन पो निस्के गौरी त ! मित्रहरू, गौरी जोशीजीले एनआरएन अमेरिकाको अध्यक्षका लागि दिएको उम्मेद्वारी फिर्ता भनेर फेरि एकपटक जग हसाए छन् । निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेद्वारी नै अमान्य गरिसकेको अवस्थामा फिर्ताको के अर्थ...
सन्दर्भ:प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणको
विश्वास गौचन /१. भारत को अर्थतन्त्रमा नेपालको ठुलो योगदान रहे पनि येस्को महत्व न भारतीयले कहिले उजागर गरे, न हामी नेपाली नै बुझ्न र गर्ब गर्न सक्यौ। २. प्रत्येक बर्ष १० अर्ब डलर भन्दा बढी को प्रत्यक्ष्ँ आर्थिक लाभ भारतले नेपालबाट पाएको छ। अनौपचारिक व्यापार, गणना नभएका सेवा, करमा योगदान, आयातमा हुने न्यून मुल्यांकन,नेपालमा भारती मुद्राको...
गौरीजी,यो तपार्इको एनआरएन यात्राको "अवसान" हो ?
प्रदीप भट्टराई /लडार्इंको मैदानमा होमिएपछि विचमै पिठ्यु फर्काउने सेनापतिको पछि को लाग्ला र ? गौरीजी, मेरो कोणमा तपार्इ अमेरिकामा अमेरिकी कानून लागू हुने कि नहुने रु भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न अदालत जानुभएको थियो । जाँदा पूर्ण बानियासँग गए पनि तपार्इ यो प्रश्नको उत्तर चाहने हजारौंको निमित्त भएर जानु भएको थियो । तर, त्यसको उत्तर नै नलिर्इ...
अमेरिकामा त को आइमाई ? को लोग्ने मान्छे ?
जित जोशी /जब तीज आउछ, हरेक साल मेरो फेसबुकको पानाहरु रातो साडी र टिकाले रक्ताम्य हुन्छन । नेपालमा त तीज पनि एक दिन दुइ दिन मात्रै आउंथ्यो क्यारे, तर अमेरिकामा त एक महिना अगाडि नै आउछ अनि एकमहिना पछि सम्म पनि आइरहन्छ । नेपालमा त आर्इमार्इहरु मात्रले मनाउने गर्थे जस्तो लाग्थ्यो तीज पर्ब, अमेरिकामा त को आइमाई ? को लोग्ने मान्छे ? जवानहरु,...
एमालेकरणको आरोप र वार्गेनिङ्ग काण्डले सतायो
भानुभक्त आचार्य/​महासंघमा निर्वाचित अध्यक्ष गोविन्द आचार्य लगायत सबैलाई बधाइ । अहिलेको जितलाई जसरी अर्थ लगाए पनि भोः १. दुई–दुई पटक प्रेस सेन्टरको संलग्नतामा महासंघको अध्यक्ष जितेको चौतारीले यसपटक पूर्वसहमति अनुसार प्रेस सेन्टरलाई अध्यक्ष सहित चित्त बुझाएर प्यानल निर्माण गर्न नसक्नुको नतिजा । २. डा. विष्टको नेतृत्वले गरेका काम...
नेपाल चीन र भारत बीचको एक रणनीतिक महत्त्वको देश
दक्षिण तिरको सीमामा भारतले बनाएका बाँध, नहर, तटबन्ध आदी संरचनाका कारण समेत नेपालको अधिकाँश मधेशको भूभाग बाढीको चपेटामा परेको पृष्ठ्भूमीमा प्रधानमंत्री देउवाको भारत भ्रमण भइरहेको छ । अर्कोतिर चीन-भारत सीमा डोक्लाममा भएको तनाबले दुबै छिमेकीको नेपाललाई आफ्नो कित्तामा तान्ने प्रयास जारी छ । नेपालमा नयाँ प्रधानमंत्री सत्तामा आउँदा...
जीवनलाई सार्थक वनाउँ
मदनकुमार दाहाल ,अर्थशास्त्री /मानिसको जीवन छोटो छ, चाहनाहरू असीमित छन , गर्नु पर्ने कार्यहरू धेरै छन, साधन र श्रोत अत्यन्त सीमित , हाम्रो सम्पूर्ण जीवन त्यही असीमित चाहना र सीमित श्रोतलाई समायोजन गर्ने सन्दर्भमा नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थको लागि भाग दौड गर्दा गर्दै वित्छ। समयले पर्खदैन। तसर्थ जस्तो परिस्थितिमा पनि रचनात्मक सन्दर्भ र...
आपतमा सहयोग गरौँ,महादेव खुशी हुन्छन्
सम्झना आत्रेय (भर्जिनिया निवासी) आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्नु हुन्छ: I havearequest to the teej party celebrators world wide: Please donate 'teej related expenses' or share whatever you can to the flood victims! अहिले देश विदेशमा जताततै तीजको नाममा भोज भतेरको धेरै खर्च हुने गर्दछ, जेजति सकिन्छ त्यो बरु यो आपतमा सहयोग गर्दा महादेव बढी खुशी होलान्। नेपालमा रुवाबासी भएको अवश्थामा सहयोग नगरी हामी कसरी पार्टीमा रमाऊन सक्छौं र...